Iwu maka ndị America na-ebu égbè banye Canada
Iwu nke Canada ga-agbaso
Ndị America na-ebu égbè Canada ma ọ bụ na-ebufe égbè site na Kanada mkpa ịma na ọchịchị Canada nwere - na-agbadosi ike-iwu na-ejidekwa akara iwu nke ndị agha America ga-agbaso na-eji ngwá agha na Canada.
Ọtụtụ nsogbu na-esi n'aka ndị America na-echezọ na ha nwere aka na ha mgbe ha na-agafe ókèala. Nke a na-emekarị ndị America site na nkwupụta ndị na-eme ka ụmụ amaala ha buru ngwá agha zoro ezo.
Enweghị ike ịkpọsa ngwá agha ọ bụla ga-eme ka njigide ahụ ma eleghị anya mbibi ngwá agha ahụ. A ga-enyocha mma ma ụlọ mkpọrọ bụ ihe ga-ekwe omume.
N'ozuzu, a na-ekwe ka ndị America nyefee ikikere atọ nwere ikikere na Canada ma ọ bụrụhaala na ụdị akwụkwọ ndị ahụ kwesịrị ekwesị na ụgwọ a kwụrụ ụgwọ. A ghaghị ịkpọ égbè na-agafe ókè. Ọbụna mgbe a na-ekwupụta egbe ma na-edezi ụdị kwesịrị ekwesị, ndị ọrụ nchịkwa na-erubere ndị Canada isi chọrọ ndị njem iji gosi na ha nwere ezigbo ihe mere eji ewepụta ngwá agha n'ime mba ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, ndị ọrụ nchebe ga-eleba anya iji jide n'aka na a na-echekwa égbè niile echere maka njem na na egbe ndị a na-ebugharị na-eme ka ndị nke a kọwara na akwụkwọ nkwupụta.
Naanị ndị dị afọ iri na asatọ ma ọ bụ karịa ka a na-ekwe ka ha jiri égbè agbagoo Canada. Ọ bụ ezie na ndị dị obere karịa 18 nwere ike iji ụgbọ agha na Kanada n'ọnọdụ ụfọdụ, onye okenye ga-anọ ya, a ga-ejikwa ngwá agha na-ejide ya.
Nkwupụta Nkwupụta Ngwá Agha nke Canada na-abụghị ndị bi na ya
Ụmụ amaala US na-eji ụta agbaba na Kanada, ma ọ bụ na-eji ụta agba site na Kanada na Alaska chọrọ ka ha kwupụta Nkwupụta Ngwá Agha Ndị Na-enweghị Onwe Gị (CAFC 909 EF). Ụdị ahụ ga-ezitere na onye ọrụ nlekọta omenala Canada na njem mbụ nke ndị njem na Canada.
Cheta, onye ọrụ nhazi ahụ ga-ahụ aka mbinye aka, ya mere, abanyela ụdị ahụ tupu oge eruo .
Ndị mmadụ na-ebu ihe karịrị egbe ụta atọ n'ime Canada ga-adịkwa mkpa iji mezuo Mpempe Akwụkwọ Nkwupụta Mbinye Aka Firearm (ụdị RCMP 5590).
Ozugbo onye ọrụ ndị omenala Canada kwadoro ya, Nkwupụta Ngwá Agha Ndị Na-adịghị Na-adịgide adịgide maka ụbọchị 60. Ụdị ahụ a kwadoro dị ka ikike maka onye nwe ya na dịka akwụkwọ nkwado ndebanye maka mbinye ụta nke wetara Canada. Enwere ike ime ka nkwupụta ahụ nweghachiri n'efu, na-enye ọ dị ọhụrụ tupu ya ejedebe, site na ịkpọtụrụ Onye Isi Isi Agha Ọkụ (CFO) (kpọọ 1-800-731-4000) nke ógbè Canada ma ọ bụ ókèala dị mkpa.
Nkwupụta a kwadoro na-enweghị Ngwá Agha na-akwụ ụgwọ ego efu maka $ 25, n'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ nke égbè agbapụtara na ya. Ọ dị mma naanị maka onye na-ede ya akara ma ọ bụ naanị maka égbè agbapụtara na nkwupụta ahụ.
Ozugbo onye na-eme omenala CBSA kwadoro Nkwupụta Ngwá Agha Ndị Na-adịghị Ala, nkwupụta ahụ na-eme ka onye nwe ya nweta ikikere ma ọ dị irè maka ụbọchị 60. Maka nleta karịa ụbọchị 60, a ga - emegharị nkwupụta maka n'efu, na-enye ha ka ha dị ọhụrụ tupu ha anwụọ, site na ịkpọtụrụ Onye Isi Ngwá Agha na - ahụ maka mpaghara ma ọ bụ ókèala dị mkpa.
Ndị na-ebu ngwá agha na Canada ga-ekwenyekwa na Nchekwa Canada, Ngosipụta, Ụgbọ njem na ijikwa ngwá agha ụta. Onye ọrụ na-ahụ maka omenala Canada na ebe nbata nwere ike ịkụziri ndị nwe ọkụ ọkụ ndị a.
Ebidoro Egwuregwu Firearms, Machibidoro ma machibidoro
Nkwado nke Nkwupụta Ngwá Agha Na-enweghị Nanị na-enye naanị ọkọlọtọ na shotguns ndị a na-ejikarị eme ihe maka ịchụ nta na ịchọta égbè ka a ga-ebuga na Canada.
A na-ewere aka ndị agha na ọkara ma ọ dịkarịa ala kilo mita anọ dịka "mmachi" firearms ma kwere na Canada, mana achọrọ ka ha kwenye na ngwa maka ikikere maka-eji égbè agbagbu. Nkwuputa Firearm a na-abụghị onye na-akwụ ụgwọ $ 50 Canada.
A na-amachibidoro ndị agha aka na mkpịsị aka karịa ihe dịka sentimita 4, na-akpaghị aka, ndị na-agbanwe ngwá ọrụ, na ngwá agha ndị na-awakpo ndị mmadụ na Canada.
Tụkwasị na nke ahụ, a pụrụ iji mmachi ụfọdụ, ọbụna ndị eji achụ nta na ịkụ azụ, dịka ngwá agha ndị a machibidoro iwu site n'aka ndị ọrụ Canada.
Ihe ndị ọzọ Ị Chọrọ Ịmata
Na nke ọ bụla, ndị njem ga-agwa ndị nwe obodo na-ahụ maka ngwá agha ọ bụla na ngwá agha ha mgbe ha na-abanye Canada. A na - enwekarị ụlọ ọrụ dị nso n'akụkụ ebe ndị agha nwere ike ịchekwa, rue mgbe onye njem ahụ laghachiri na United States, mana nke a ga - eme tupu ịnwa ịbanye Canada.
Iwu Canada chọrọ ka ndị isi jide ngwá agha na ngwá agha site na ndị mmadụ na-agafe ókèala nke na-agọnahụ na ha nwere ha. Ọ dịghị mgbe a na-alọghachi ụta egbe na ngwá agha.
Site na ụzọ kachasị mfe ị ga-esi eji ngwá agha na-eme ka ha dọọ ma zigara gị ebe ị na-aga site na ụgbọelu azụmahịa.
Ònye bụ Dr. Roberta Bondar?
Eziokwu Eziokwu Banyere Edmonton, Isi Obodo nke Alberta
Fredericton, bụ Isi Obodo New Brunswick
Code Postal maka Canada
Kedu ihe bụ usoro nke nzuko omeiwu na Canada?
Gịnị Mere Ndịàmà Jehova Ji Arụ Ọrụ n'Ụzọ Mgbasa Ozi?
Egwuregwu Arts Martial: Judo na Jiu-Jitsu nke Brazil (BJJ)
Ike nke Akụkọ nke Ice Iceaker
Mụta Banyere Ụyọkọ Ụyọkọ na asụsụ Bekee
Ihe mere ndị mmadụ ji eche na Spanish dị mfe karịa French
Ụzọ Isi Bụrụ Onye Nkụzi Ntụziaka
Therizinosaurs - Dinosaurs dị iche iche
Onwe nke Scottish: Agha Bannockburn
Otu esi emeghachi GMAT nwere ike inyere gị aka
Chemistry Abigbido Malite na Akwụkwọ Ozi L
Ọrịa na Pisces Na-achọ mmekọrịta
Akwukwo akwukwo na Aquarius nwere nkwekorita
Zute Onye Isi-agha Jehudiel, Mmụọ ozi nke Ọrụ
Top 10 Albums nke Pop Pop
Ihe ngosi nke Ụlọ Ihe nkiri Grik Oge Ochie
Kedu ihe bụ Akwụkwọ nke Akwụkwọ?
Nwanne Nwanne - Nwanne Mkpa
Kedu ihe kachasị mma?
Kedu nke Na-arịgo Ibu Ihe Ọ Dị Gị Mkpa?
Nkume Atụmatụ Starfish ma ọ bụ Ịchọ Mma
Kedu ihe bụ Trademark?
Na April, ị na-achọpụta nke ọ bụla: French to English Translation
Kedu ihe bụ nkọwa nke sacrament na Chọọchị Katọlik?
Ugwu Amazon ọ ga-anọgide na-ala n'iyi?
Vastu Shastra: Ihe Nzuzo nke Obi Ụtọ na Ezigbo Ụlọ
Gịnị mere ndị ọnụahịa ga-eji bụrụ ndị nwere ike ịba uru?